पहिलो बैठक मा धेरै उपस्थिति गर्न विशेष ध्यान। केश सहित। सबै कपाल, साथै हतियार पछि, त्यो आफु को हेरविचार लिन्छ कसरी राम्रो को एक सूचक हो। यो haircuts र स्टाइल को सबै प्रकार धेरै समय समर्पित गर्न आवश्यक छ कि होइन हुनत। अझै पनि केही ध्यान उनको कपाल भुक्तान गर्नुपर्छ। प्रयोग गरिरहेका, केही नयाँ कपाल शैलीहरू प्रयास गर्नुहोस्। मध्यम वा लामो कपाल को मालिकहरूले कल्पना लागि एक विशाल क्षेत्र छ। बुनाई मा braids मध्यम वा लामो कपाल केही रचनात्मकता र कल्पना पनि समावेश छ।
हालैका वर्षहरूमा बुनाई सबै प्रकारका अत्यन्तै लोकप्रिय बनेका छन्। फ्रान्सेली चुल्ठो लगभग हरेक बुनाई को आधार छ। त्यसैले, हरेक केटी यो चुल्ठो गर्न सक्षम हुनुपर्छ। ड्राइभिङ बुनाई फ्रान्सेली braids तीन किसिमहरु को सामान्य braids braiding समान।
तसर्थ, बुनाई braids तीन किसिमहरु मास्टर सुरु गर्न। सबै बाल पुच्छर मा संकलित र तीन किसिमहरु विभाजित छन्। माथि पार गर्न भने बाँकी, उच्च मा राख्न लक (अब यो औसत छ)। यसबाहेक, औसत माथि फिर्ता राख्न सही (पहिले यो बायाँ थियो)। फेरि, दायाँ बीचमा भन्दा बीचमा भन्दा बायाँ Strand। र यति बाल बुनाई को अन्त सम्म जारी। रबर ब्यान्ड समाधान गर्न सुझाव।
तपाईं चुल्ठो मध्यम बाल बुनाई सुरु गर्नु अघि किसिमहरु छैन भ्रमित बुनाई जब गर्न, यो आफ्नो राम्रो-कंघी गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। फ्रान्सेली चुल्ठो Braiding टाउको माथि सुरु हुन्छ। यो, बाल को सानो Strand विभाजन गर्न तीन भागमा विभाजित र तीन किसिमहरु को एक चुल्ठो रूपमा braiding सुरु आवश्यक छ। एक चुल्ठो मा बाल को podpletat बाँकी समयमा, एकांतर बाँयामा चित्रमा देखाइएको, तीन कोर को एक को एउटा सानो खण्डको प्रत्येक पक्ष बुझ्दा। ड्राइभिङ फ्रान्सेली चुल्ठो बुनाई एकदम सरल छ र केवल एक सानो अभ्यास आवश्यक छ।
बुनाई braids मध्यम कपाल मा तपाईं असामान्य सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ हरेक दिन को लागि Hairstyles। यो केश पनि कहिलेकाहीं पनि भनिन्छ, माछा चुल्ठो छ "स्पाइक"। बुनो माछा थुक्नु, फ्रान्सेली सिर्जना गर्न यस्तै केही। तर केवल दुई किसिमहरु प्रयोग गर्दछ। त्यसैले, फिर्ता बाल slicked, यो दुवै पक्षले दुई किसिमहरु विभाजन गर्न आवश्यक छ (मन्दिरमा हुन सक्छ) र प्रत्येक अन्य तिनीहरूलाई पार। अब, नयाँ Strand विभाजन गर्न, र सही यसलाई जडान गर्नुहोस् छाडा कपाल को बायाँ छेउमा किसिमहरु समातेर। त्यस्तै, बाल को एक Strand को दाहिने तिर विभाजित र बायाँ जोडिएको छ। यसरी, तिनीहरूलाई बीच पार कपाल। त्यहाँ एक मुक्त, गैर-entrapped बाल नभएसम्म braiding जारी। अर्को त्यसैगरि मा बुनाई प्रदर्शन। सही पक्ष मा अलग सानो कपाल को खण्ड को बायाँ तर्फ बाट। अलग र बाँया मा पारित नै Strand को दाहिने तिर पनि। र त यो केश को अन्त सम्म जारी राखे। लोचदार वा Barrette समाधान गर्न सुझाव। बुनाई braids माछा पनि शीर्ष र पुच्छर देखि सुरु गर्न सक्दैन। यो फोटो मा देख्न सकिन्छ।
मध्यम कपाल मा braids बुनो - एक महान विकल्प सधैं प्रयास र समय एकदम बिट खर्च, सुन्दर हेर्न। होने दुई वा तीन किसिमहरु को आधारभूत प्रकार महारत, तपाईं सजिलै चार वा बढी किसिमहरु को बुनाई मा सार्न सक्नुहुन्छ। यो थप आफ्नो कपाल विविधता र अरूको प्रशंसा गर्नेछन्।
बाल लागि दालचिनी र मह संग घर बनाएको मास्क
कसरी स्थायी बाल हटाउन?
VA Zhukovsky, "वसन्त को आ।" कविता को विश्लेषण
विवाह दिन कसरी छनौट गर्ने?
को skis को लम्बाइ कस्तो हुनुपर्छ? क्रस-देश skis। यस ओरालो स्की को लम्बाइ